नक्कली प्रेमी बनेर सैनिक जवानको ४ लाख ठगी !
सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा आएको युवतीको प्रेमजालमा पर्दा नेपाली सेनाका एक जवानले साढे चार लाख रुपैयाँ गुमाएका छन् । दोलखा सैलुङ–५ का हरिबहादुर कार्की युवतीबाट ठगिएका हुन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार उनलाई प्रेमजालमा पार्ने २३ वर्षीया कल्पना बस्नेत भुजेल हुन् । उनले फेसबुकमा अर्कै युवतीको फोटो राखी बनाएको ‘फेक आइडी’बाट कार्कीलाई प्रेमजालमा परेकी थिइन् । आफ्नो ‘ओपन हार्ट सर्जरी’ गर्नुपर्ने भन्दै उनले कार्कीसँग पटक–पटक गरी साढे चार लाख रुपैयाँ लिएको प्रहरीले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाका अनुसार युवतीले चलाखीपूर्ण ढंगले कार्कीसँग रकम लिएको खुलेको बताए । ‘दुवै एकै ठाउँका हुन् । युवती विवाहित र बालकोटमा बस्ने रहिछन् । उनले अर्कै केटीको फोटो राखेर फेसबुकमा फेक आइडी बनाई प्रेमजालमा पारेको देखिन्छ,’ एसएसपी थापाले भने ।
ठगिइसकेपछि मात्रै युवती आफ्नै गाउँकी भएको खुलासा
यही बीचमा कार्कीलाई अर्की एक युवतीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । उनले स्वीकार गरे । उनको कुराकानी नयाँ युवतीसँग पनि हुन थाल्यो । कुराकानीकै क्रममा युवतीले आफू ‘संगीता बस्नेत’ को घरबेटी भएको बताइन् । युवतीसँग उनी अझ नजिकिए । उनले आफ्नो प्रेमिकाका बारेमा अझ गहिरिएर सोध्न थाले । युवतीले पनि ‘संगीता असल केटी भएको र विवाह गर्दा राम्रो हुने’ सल्लाह दिन थालिन् ।
कुराकानीकै क्रममा ती युवतीले ‘संगीता गम्भीर बिरामी भएको र उनको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको’ बताइन् । प्रेमिका विरामी परेको खबरले उनलाई बेचैन बनायो । उनले सोही युवतीमार्फत उनको मुटुको अप्रेसन गर्र्नुपर्ने थाहा पाए । उनी तुरुन्तै भेट्न नर्भिक अस्पताल जाने मनस्थितिमा पुगे । युवतीलाई फोन गरे । युवतीले नर्भिक आउन भनिन् । उनी तुरुन्तै पुगे ।
युवती नर्भिक छिर्ने गेटमै भेटिइन् । भेट्न डाक्टरको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै दुई घन्टा कुराइन् । पछि भेट्न नमिल्ने डाक्टरको सल्लाह रहेको उनले भनिन् । सहयोग गर्न भन्दै लिएर गएको डेढ लाख रुपैयाँ युवतीको हातमा राखिदिए । निराश हुँदै उनी घर फर्किए । भोलिपल्ट फेरि प्रेमिका भेट्न उनी अस्पताल पुगे । यसपटक पनि उनले भेट्न सकेनन् । तर, रकम भने कहिले आइएमई गरेर पठाउँथे । कहिले युवतीको हातमा राखेर पठाउँथे ।
प्रेमिका अब बाँच्न नसक्ने खबर उनले युवतीमार्फत थाहा पाए । भावुक बनेका उनले प्रेमिकाका फोटो राखेर नयाँ फेसबुक आइडी बनाउने निधो गरे । स्वीकृतिका लागि युवतीलाई सोधे । उनले हुन्छ भनिन् । लगत्तै कार्कीले युवतीको फोटो राखेर फेसबुक आइडी बनाए । हुनेवाला श्रीमती भन्दै आइडीमा भावना पोख्न थाले । त्यसको केही दिनपछि उनलार्ई प्रहरीको फोन आयो । अनुसन्धानका लागि भन्दै महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकु बेलाइयो ।
उनी निर्धक्क महाशाखा पुगे । सोधीखोजी गर्दा बल्ल पो थाहा पाए, प्रेमिका आवरणमा गफ गर्ने र आफूलाई घरबेटी भन्दै प्रेमिकाबारे वर्णन गर्ने युवती आफ्नै गाउँकी संगीता बस्नेत भुजेल रहिछिन् । प्रेमजालमा परी रकम ठगी गर्न उनले फेक आइडी बनाएकी रहिछिन् । जसमा फोटोसमेत अर्कै युवतीको राखेकी रहिछिन् । फोटोको दुरुपयोग भएको भन्दै ती युवती उजुरी लिएर प्रहरीमा पुगेपछि मात्रै यी रहस्य बाहिरिन पुग्यो । ‘पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने यस्ता घटना बढेका छन् । प्रलोभनमा परेकाहरू फसेका छन्,’ थापाले भने ।
यसरी ठगिए कार्की
कार्की नेपाली सेनाका जवान हुन् । उनको काठमाडौंमै ड्युटी छ । अविवाहित उनी सामाजिक सञ्जालमा रमाउँदै थिए । यही क्रममा ‘संगीता बस्नेत’ नामको फेसबुक आइडीबाट ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ आयो । आइडीमा अपलोड फोटो आकर्षक थियो । एसेप्ट गर्नुपूर्व उनले आइडीको प्रोफाइल हेरे । प्रोफाइलमा केही फोटा देखिए । सबै आकर्षक थिए । उनले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्विकारे । लगत्तै आइडीवालाले ‘हाई’ भन्यो । उनले जवाफ फर्काए ।
दुईबीच निरन्तर कुरा हुन थाल्यो । फोन नम्बर आदान–प्रदान भए । अब कुराकानी फोनबाट पनि हुन थाल्यो । दुईबीच अन्तरंगका सबै कुराकानी भए । कार्की युवतीसँग भिडियो कल गर्न चाहन्थे, तर, उनी सधैँ टारिरहन्थिन् । फेसबुक र फोनमा भने घन्टौँ गफिन्थे । यसवेलासम्म कार्की युवतीको प्रेममा परिसकेका थिए । उनले तिनै युवतीसँग विवाह गर्ने मनस्थिति बनाए । फोनबाटै युवतीसँग विवाहको प्रस्ताव गरे । युवतीले पहिलो प्रस्ताव नै सहर्ष स्वीकार गरिन् । कार्की युवतीलाई भेट्न चाहन्थे, तर उनी भने अनेक बहाना झिकेर भेट्न इन्कार गरिरहन्थिन् । यो समाचार नयाँ पत्रीका दैनिकमा लेखिएको छ ।
सफलताको लागि कसरी समयको ब्यबस्थापन गर्ने ?
महान बिद्वान Alan Lakein भन्नुहुन्छ – “ Time = life, therefore, waste your time and waste of your life, or master your time and master your life .” अर्थात समय भनेको जीवन हो, समयलाई खेर फाल्नु भनेको जीवनलाई खेर फाल्नु हो । अनि समयको सदुपयोग नै जीवनको सदुपयोग हो । बास्तवमा समय साच्चै अमुल्य हुन्छ । यहि तपाई जीवनमा साच्चि कै सफलता चाहानुहुन्छ भने तपाईले समयको महत्व बुझ्न जरुरी हुन्छ । समयको महत्व बुझ्नु भनेकै समयको सदुपयोग गर्नु हो ।
समयलाई हामी घडिले नाप्छौँ । समयलाई हामीले सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा, दिन, हप्ता, महिना, वर्ष हुदै शताब्दि जस्ता रुपमा बाडेका छौं । यो केवल हाम्रो सजिलोको लागि हो । यो मापन जहिल्यै एउटै हुन्छ । हामी भन्छौं – मसँग .. यति वर्षको अनुभब छ, मैले यति वर्ष सेवा गरेको छु । मैले जीवनका सबै दिनहरु नि यहि काममा बिताएको छु । हामी यसरी समयको इकाईसँग दाजेर आफुलाई सक्षम ठान्ने दुस्साहश गर्छौँ । तर यसरी हेर्दा त हामीले समय सदुपयोग गरेको होइन आफै बितेको हो । घडिको समयले १० वर्ष कटाउनमा हाम्रो कुनै भुमिका हुन्न । समयको व्यबस्थापनको बारेमा कुरा गर्दा समय कति गयो भन्ने भन्दा नि समयको कति सदुपयोग भयो ? भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ ।
तपाई ५० वर्ष पुग्नु ठुलो कुरा होइन । ठुलो कुरा त यो हो कि – तपाईले के सफलता हासिल गर्नु भो ? मानौं तपाईले ५० वर्षमा ५० लाख कमाउनु भयो तर कसैले ५ वर्षमा नै ५० लाख कमायो भने यहाँ कमाउने सवालमा तपाईको ५० वर्ष र उसको ५ वर्षको महत्व उत्तिकै हुन्छ । केहि मान्छेहरु यस्ता हुन्छन – जसले सामान्य मान्छेले १० वर्षमा पाएको सफलतालाई एकै वर्षमा हासिल गर्छन । आखिर यस्तो किन हुन्छ त ? यो सबैको कारण हो समयको ब्यवस्थापन । तपाई जति राम्ररी समयको व्यबस्थापन गर्नु हुन्छ, त्यति नै छिटो सफलता हासिल गर्नुहुन्छ ।
त्यसो भए के हो त समय व्यबस्थापन भनेको ? तपाईले खर्च गर्ने समयलाई व्यवस्थित पार्नु नै समय व्यबस्थापन हो । मानौं तपाईसँग एक दिनको २४ घन्टा छ । यो २४ घन्टालाई तपाई आफ्नो लक्ष्य साकार पार्नलाई पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यति कै बेकुफको गेम खेलेर वा रु कुनै बेकामे काम गरेर पनि बिताउन सक्नु हुन्छ । अनि अर्को कुरा – तपाई आफ्नो समयलाई सहि काममा नै सदुपयोग गर्न त चाहानुहुन्छ तर तपाईसँग समय व्यबस्थापन गर्ने कला छैन भने तपाईको समय त्यति कै बित्न सक्छ । तपाईले फाल्तु काम गर्दा गर्दै आफ्नो लक्ष्य अनुसारको काम गर्न समय नै पुग्दैन । हो, यि सबै कुराको तालमेल मिलाएर आफ्नो लक्ष्य अनुसारको काम गर्ने पर्याप्त समय निकाल्नु नै समय व्यबस्थापन हो ।
आउनुहोस कसरी समयको व्यबस्थापन गरेर सफलता हासिल गर्ने भन्ने बारे चर्चा गरौः
१.सबैभन्दा पहिला आफ्नो भर्खर बितेको एक हप्ताको बिश्लेषण गर्नुहोसः तपाईले लक्ष्य बनाएर सो अनुसारको काम गर्न त थाल्नु भयो । तर मलाई लाग्छ तपाईलाई पक्कै पर्याप्त समय पुगिराखको छैन । त्यसैले तपाईको समय कसरी बितिरहेको छ भनेर बितेको अन्तिम हप्ताको समय कसरी बितेको रैछ भनेर बिश्लेषण गर्नुहोस । स – साना काम पनि नछुतुनुहोस । जस्तैः तपाईले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न कति समय लगाउनु भयो ? फेसबूक वा अरू सामाजिल संजालमा कति समय बिताउनु भयो ? कति समय अरुसँग कुरा गरेर बिताउनु भयो ? आदि । यसरी हेरेर बिश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको धेरै जसो समय त फाल्तु काम नै बितिरहेको हुन्छ । त्यसैले अब कसरी झिनामसिना काममा लगाएको समयलाई आफ्नो लक्ष्य साकार पार्ने काममा लगाउने भनेर महसुश गर्नुहोस । तपाईले यसरी महसुश नगरी समय ब्यबस्थापन गर्न सक्नुहुन्न ।
२. आफ्ना कामहरुको प्राथमिकता चयन गर्नुहोसः माथी भने झै कुन – कुन काममा कति समय बितेछ भन्ने कुरा महसुश गरिसके पछि अब आफ्ना सबै कामलाई १,२,३…….. गरेर प्राथमिकता दिनुहोस । यसरी प्राथमिकता छनौट गर्दा महत्वपुर्ण र जरुरी काम पनि छुट्याउनुहोस । जस्तैः तपाईको लागि आफ्नो लक्ष्य अनुसारको काम गर्नु महत्वपुर्ण हो । तर तपाईलाई केहि स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या छ भने जचाउन जानु जरुरि काम हो । यसरी जरूरी कामहरूलाई केहि समय दिएर बाकि समय महत्वपुर्ण कामलाई दिनुहोस । काम गर्दा तपाई छनौट गरेको १,२,३ ……….प्राथमिकता अनुसार गर्नुहोस । यसो गर्दा तपाईले सबै काम नभ्याए पनि तपाईले मुख्य कामलाई भने गर्नु हुनेछ ।
३. कार्य योजना बनाउनुहोसः आफ्नो काम र प्राथमिकताको दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र बार्षिक कार्ययोजना बनाउनुहोस ।
४. कार्ययोजनाको पुनरावलोकन गर्नुहोसः बीच – बीचमा आफ्नो कामको पुनरावलोकन गर्नुहोस र तपाई कहाँ चुक्नु भएको छ, त्यहाँ सुधार गर्नुहोस ।
५. आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोसः तपाई आफ्नो कामको रफ्तार बढाउन आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस । तपाईले हिजो कुनै काम १ घण्टामा गर्नु भएको थियो भने आज त्यहि काम ५० मिनेटमा सक्ने कोसिश गर्नुहोस ।
६. एकै पटकमा धेरै काम गर्ने कोसिश नगर्नुहोसः भनिन्छ नदि तर्दा एकै पटक दुई वटा नाउमा खुट्टा हाल्न हुन्न, ठिक त्यस्तै तपाईले एकैपटक धेरै काममा हात हाल्नु भयो भने तपाईलाई सबैतिर हात लाग्यो सुन्य हुन्छ ।
७. कहिल्यै नहबडाउनुहोसः वीरको परिक्षा संकटमा हुन्छ भनेझै तपाईलाई अप्ठेरो पर्दा कहिले नहडबडाउनुहोस । के गर्ने भनेर छिटो निर्णय लिनुहोस र त्यहि अनुसार गर्नुहोस । यदि तपाई हडबडाउनु भयो भने तपाईलाई ढिला हुन्छ नै तपाईको काम पनि बिग्रिन्छ ।
८. सबै कामलाई सु – व्यबस्थित गर्नुहोसः तपाईको नित्यकर्मदखि सबै कामलाई व्यबस्थित गर्नुहोस । तपाईले आफ्नो कामलाई व्यबस्थित गर्न सक्नु भएन भने समय बर्बाद हुनुका साथै काममा रुचि पनि घट्दै जान्छ ।
९. सुस्सता हटाउनुहोसः मानिसहरु छिटो हुने कामलाई पनि हुने नहुने कुरा जोडेर समय बर्बाद गर्छन । त्यसैले हरेक कामलाई छिटो र छरितो तरिकाले गर्नुहोस ।